သန်လျင်မြို့ မှ လူသတ်မှုဖြင့် ထွက်ပြေး တိမ်းရှောင်နေသူကို မြဝတီမြို့၌ အိမ်ထောင်ကျ နေထိုင်စ?? - Yangon Media Group
မြဝတီ၊ စက်တင်ဘာ ၄
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး သန်လျင်မြို့နယ်တွင် လူသတ်မှုဖြင့် ထွက်ပြေးတိမ်း ရှောင်ကာ ကရင်ပြည်နယ် မြဝတီမြို့၌ အိမ်ထောင်ကျပြီး နေထိုင်လျက်ရှိသူ တရားခံပြေးတစ်ဦးအား နယ်မြေခံရဲတပ်ဖွဲ့မှ ဖမ်းဆီး ရမိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ဖြစ်စဉ်မှာ မြဝတီရဲစခန်းမှ နယ်ထိန်းအရာရှိ ရဲအုပ်အောင်ချမ်းမွန်နှင့် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များသည် သက်သေများနှင့်အတူ စက်တင်ဘာ ၃ ရက် နံနက်က မြဝတီမြို့ ပေါ်ရပ်ကွက်များအတွင်းနယ်မြေ သတင်းစုံစမ်းစဉ် နံနက် ၁၁ နာရီခွဲတွင် မြဝတီမြို့ အမှတ်(၄)ရပ်ကွက် အောင်မြေရွှေဘုံရပ်ရှိ စားသောက်ဆိုင်အနီး ရောက်ရှိစဉ် မသင်္ကာဖွယ်ရာတွေ့ရှိသူ ဇော်မင်းဆိုသူအား ရဲစခန်းသို့ ခေါ်ယူစစ်ဆေးခဲ့ရာ ၎င်းသည် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး သန်လျင်မြို့နယ်၌ နေထိုင်စဉ် ၂ဝဝ၄ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄ ရက် မွန်းလွဲ ၁၂ နာရီခွဲက ဇနီး ဖြစ်သူနှင့် စကားများပြီး ဇနီးဖြစ်သူအားအနီးရှိ စက်ဘီးဆိုင်မှ ဝက်အူလှည့်ယူပြီး ဗိုက်ကိုထိုးကာ ထွက်ပြေးခဲ့သည့်အတွက် ၎င်း၏ဇနီးဖြစ်သူမှာ သေဆုံးသွားခဲ့သည်ဟုဆိုသည်။
အဆိုပါဖြစ်စဉ်နှင့်ပတ်သက်၍ ဇော်မင်းအား သန်လျင်မြို့မရဲ စခန်းမှ (ပ)၁၂၄/၂ဝဝ၄၊ ရာဇသတ်ကြီးပုဒ်မ-၃ဝ၂/၃၂၆/ကျင့် ၅၁၂ ဖြင့် အမှုဖွင့်အရေးယူထားသူဖြစ်ကြောင်း စစ်ဆေးပေါ်ပေါက်ခဲ့သည်။ အဆိုပါဖြစ်စဉ်နှင့်ပတ်သက်၍ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး သန်လျင်မြို့နေ ဇော်မင်း(ခ)ဖိုးညှက် (ခ)လှဌေး(၅၁)နှစ်အား မြဝတီ မြို့မရဲစခန်း၌ ဖမ်းဆီးထားပြီး သန်လျင်မြို့မရဲစခန်းသို့ လွှဲပြောင်းရန် ဆောင်ရွက်နေကြောင်း သိရသည်။
ဒီချုပ်သို့ မဝင်ပါက အခြားပါတီသို့လည်း မဝင်ဘဲ ကိုယ်တိုင် ပါတီထောင်ရန် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မ??